Soomaalida sharci la’aanta ah oo shaqada lagu adkeeyay [Video] | Somaliska
Dowlada Sweden ayaa balanqaaday sanadkii 2010 in dadka magangalyo doonka ah loo suurto galin doono in ay shaqeystaan inta ay sugayaan sharciga. Hada ayay cadaatay in Soomaalida qaasatan aysan shaqayn karin maadaama ay jiraan shuruudo aqoonsi oo aysan buuxin karin.
Balanqaadka dowlada oo aad loo shaaciyay loona buunbuuniyay sanadkii 2010 ayaa wasiirka Socdaalka waxa uu warbaahinta ku qoray in dadka magangalyo doonka ah ay maalinta koowaad ee ay Sweden iska dhiibaan ay shaqo raadsan karaan. Balse balanqaadkaas ayaan laga dhabayn qaasatan marka laga hadlayo Soomaalida oo aan midna loo ogolaan in uu shaqeeyo.
Qofka magangalyo doonka ah ayaa Laanta Socdaalka ka dalbanaya ogolaansho loo yaqaan AT-UND oo lagu qorayo kaarka aqoonsiga. Balse Soomaalida ayaa loo diiday ogolaanshahaas maadaama aysan cadeyn aqoonsigooda oo laga doonayo in ay soo bandhigaan Baasaboor. Dadka ka soo jeeda Afghanistan ayaa sidoo kale haysataa dhibaatadaan.
Wasiirka Socdaalka oo ah nin lagu yaqaano qaab daro ayaa markii wax laga waydiiyay arintaan iyo in uusan fulin balan qaadkii sanadkii 2010 ayuu ku jawaabay in “natiijada laga filayay barnaamijkaas uu yahay sidii la doonayay. ”
Dadka Swedish-ka ah ayaaba shaqo la`, soogalootiga degenaanshaha haysta warkooda daa, sharci laawe maxaa u yaal? 45% ayaan u malaynayaa in ay shaqa la`aanta Sweden tahay.
November 3, 2012 at 17:37
Waayaab waxaa joogaa Sweden 2 sano waxaan dhigtaa konvuxka mudo yar ayaan luuqada ku fahmay waxaana sameeyay 5 pratik kii lixaad ayaan kuhelay shaqo 6 milood ah oo hada iga dhamaatay.
Wax fudud maahan in Sverige shaqo laga helo marka waxaan rabaa in aan raadiyo wado aan kaga tago wadan kaan cusuri haysto.Kuwa aan sharciga lahayn meesha qiil ooma yaalo ha daalina
kkkkkkkkkkkkk waa wax lagu qoslo in ladhaho dadsharci la aan ah ayaa shaqo raad sanaayo 4 sano ayaan jogaa 6 pratik wali shaqo ma helin marka riyada naga dhaaf jimcaale swedhan wata qanaa see camal
waa runtaa timirtii horeba dab loo waaaaaaaaaaaaaa kuwii passka weynaa haystay ayaa shaqo la,aan ah iska dhaaf mid cusub
Taas waa been sewedan waa talaa shaqo ee waxaay ku xirantaahy xibrad iyo aktiv nimo so waxaan dhihi lahaa waxa barta am waxa barashadiin la so baxa aad qarisiin qof yiri waligay waxa ma so baran oo been ah shirkada shaqalaysanayso waa tee war nimanyahoow wadan ajanabig oo dhan waa shaqaystaa maxaa Somalida fadhisiyya oo sHaqo ma taalo ugu hayaan aniga ahaa 4 sano joogaa sidiin kale sen waan isku wadaa shaqo iyo waxa barasho bal waan badala shaqooyinka so waxa kaliya oo loo bahanyahay waa in aad markaste dalbataa shaqo blus in aa qimrad haysataa thanks .
Wadanka ku cusboow am waligaa joog waa nin walbe iyo aktiv nimadiis intee 10 sano joogto aan waligeed shaqeen and intee 2 sano joogto oo shaqaynayo so somalida cusubna insha alaah waa ka duwanayaa kuwa kale dadaal dhahay aniga never give up .
asc sweden shaqo watala laakin somalida
ayaan shaqesan waxay raban ceyrta